တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်က အရှေ့အာရှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အချက်လေးချက်ပါသော အဆိုပြုချက် တင်သွင်း - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်သည် ၁၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က တက်ရောက်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ လေးစားမှုရှိရန်၊ အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုတွင် ၎င်းတို့၏ ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရန် နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု တိုးမြှင့်ရန် ဆက်စပ်နိုင်ငံအသီးအသီးအား တိုက်တွန်းအားပေးထားသော အချက်လေးချက်ပါသော အဆိုပြုချက် ကို တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် အဓိကအာရှပစိဖိတ်နိုင်ငံများမှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် “ခေါင်းဆောင်များ ဦးဆောင်သည့် မဟာဗျူဟာမြောက်ဖိုရမ်” တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုယ်စားပြုမှုနှင့် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနှစ်ခုလုံးကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အရှေ့အာရှအနေဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအတွင်း တွန်းအားသစ် ဆက်လက်ဖြည့်တင်းရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် စီးပွားရေးနာလန်ထူမှုကို တစ်ပြိုင်တည်း တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က ပေကျင်းမြို့တော်ရှိ ပြည်သူ့ခန်းမကြီး၌ ၁၆ ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်နေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် ကိုယ်ပိုင်ဦးတည်ချက်အား အမြဲတစေ လိုက်နာသင့်ကြောင်း၊ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းတွင် ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းသင့်ကြောင်း၊ မျှတသောနည်းလမ်း၌ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးနှင့် လုံခြုံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်သွားသင့်ကြောင်း လီက ထောက်ပြပြောကြားခဲ့သည်။ အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှု တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးသည် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး အုပ်ချုပ်မှုတွင် အခြေခံစံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ အရေးပါသော လမ်းညွှန်စည်းမျဉ်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် လီသည် အချက်လေးချက်ပါသော အဆိုပြုချက်အား တင်သွင်းခဲ့သည်။၎င်းတို့အနက် ပထမတစ်ချက်မှာ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရန် အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရမည်။ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆက်စပ်သောနိုင်ငံများ၏ လိုအပ်ချက်အရ ၎င်း၏ တတ်စွမ်းသမျှအကောင်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစွမ်းဆောင်မှု အဆင့်မြှင့်တင်ရန် ကနဦး တရုတ်-အာဆီယံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား အရှိန်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ပြောခဲ့သည်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် အားလုံးပါဝင်သော စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု မြှင့်တင်ရန်၊ လွတ်လပ်ပြီး မျှတသောကုန်သွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် နိုင်ငံတကာထောက်ပံ့သယ်ပို့မှု ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိစေရန် စသည်တို့ ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး (RCEP) ဆောလျင်စွာ အသက်ဝင်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအား အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဘက်စုံ တိုးတက်မှုရှိသော ပစိဖိတ်ရပ်ဝန်းနိုင်ငံများ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership =CPTPP) ၌ ချိတ်ဆက်ရန် တရားဝင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ သဘောတူညီချက်သည် တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးရေး ကတိအား ထပ်မံ အဆင့်မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်နိုးကြားလာစေရန် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုလည်း ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဆိုသည်။
အဆိုပြုချက်တွင် ပါဝင်သော တတိယအချက်အနေဖြင့် နိုင်ငံများအားလုံးသည် တာဝန်ယူမှုခြားနားခြင်းမရှိဘဲ ဘုံစည်းမျဉ်းအရ အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု စိန်ခေါ်မှုအား တုန့်ပြန်ရေး၊ ပဲရစ်သဘောတူညီချက်အား အပြည့်အဝ ထိထိရောက်ရောက် အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ မျှတ၍ အစီအစဉ်တကျ ကာဗွန်လျှော့ချရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်၍ စိတ်ချရသောစွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှု ဆောင်ရွက်နေစဉ် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ စုပေါင်းအောင်မြင်မှုရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
စတုတ္ထအချက်မှာမူ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် အာဆီယံ ဗဟိုပြုမှုကို ထောက်ခံသွားသင့်သည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ အာဆီယံအား ဗဟိုပြုခြင်းဖြင့် ပွင့်လင်းပြီး အားလုံးပါဝင်သော ဒေသဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တည်ဆောက်ပုံသည် ဒေသတွင်း ကာလရှည် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာရေးအတွက် အရေးပါသော အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း တည်ဆောက်ရေး၊ ကုလသမဂ္ဂ၏အရေးပါမှုကို ဗဟိုပြုလျက် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ နိုင်ငံတကာစနစ်အား စောင့်ထိန်းရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ပံ့ပိုးသွားသင့်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် အရေးပါသည့် ပါဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် “အာဆီယံနည်းလမ်း” ဖြင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စရပ်များအား သင့်တင်လျောက်ပတ်စွာ ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ အာဆီယံ စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးလုပ်ငန်းများ မြှင့်တင်ရာ၌ အာဆီယံအား ထောက်ခံကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်သည် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများအားလုံးအတွက် ဘုံနေအိမ်တစ်လုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ဘုံအကျိုးစီးပွားအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခြင်းနှင့် ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခြင်းကို ထိန်းသိမ်းလျက်ရှိကြောင်း လီက ပြောခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ နိုင်ငံများ ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရှိ အခြေအနေအလုံးစုံမှာ တည်ငြိမ်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု လီက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ထိရောက်၍ ခြေခြေမြစ်မြစ်ရှိသော ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ဆောလျင်စွာ ရရှိရေး သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ် နိုင်ငံများ အပြုအမူဆိုင်ရာ ကြေညာစာတမ်း (DOC) ကို အပြည့်အဝ ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိကြောင်း၊ နှစ်ဘက်အနေဖြင့် ကပ်ရောဂါသက်ရောက်မှုကို ကျော်လွှားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် တောင်တရုတ်ပင်လယ် နိုင်ငံများ အပြုအမူဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် (COC) အပေါ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ တက်ကြွစွာမြှင့်တင်ခဲ့ကြောင်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို လေးစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက အလေးထားပြောခဲ့သလို တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံများအားလုံးနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားကောင်းရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးချဲ့ရန်၊ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုရရှိရေးနှင့် အရှေ့အာရှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် စာမျက်နှာသစ် ရေးသားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်၊ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဖူမီအို ခီရှီဒါ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် နာရန်ဒြာမိုဒီ၊ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် စကော့မောရစ်ဆင်နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် ဂျာဆင်ဒါ အာဒန် တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အစည်းအဝေး၌ ခေါင်းဆောင်များသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှစ၍ ထိပ်သီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ သမုဒ္ဒရာ၊ ပညာရေးနှင့် အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စသည့်နယ်ပယ်များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား အဆက်မပြတ်မြှင့်တင်လျက်ရှိသလို အပြုသဘောဆောင်သည့် ရလဒ်များလည်း ရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများသည် တစ်နိုင်ငံတည်း ကြုံတွေ့ရနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောကြားခဲ့သည်။ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် ဘုံအလေးထားမှု၊ ဘုံတုန့်ပြန်မှုနှင့် ဘုံကြွယ်ဝချမ်းသာမှုစိတ်ဓာတ်ဖြင့် နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိန်းသိမ်းရန်၊ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ဆေးဝါးများ သာတူညီမျှဖြန့်ဖြူးမှု တိုးမြှင့်ရန်၊ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားသင့်သည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံများအားလုံးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်များ တည်ငြိမ်ချောမွေ့စွာ ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒေသတွင်း စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှု နက်ရှိုင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ခေါင်းဆောင်များက ဆိုသည်။
အာဆီယံ ဗဟိုပြုမှုနှင့် အာဆီယံ ဦးဆောင်သော ဒေသတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမူဘောင်ကို လေးစားရန်နှင့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာကြီး၌ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု မြှင့်တင်ရန် အတူတကွ ဆောင်ရွက်ရန် ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 28 (Xinhua) — Chinese Premier Li Keqiang on Wednesday attended the 16th East Asia Summit, and put forwardafour-point proposal in encouraging relevant parties to respect each other, work together, increase their input on fighting COVID-19 and economic recovery, uphold regional peace and stability, and promote development and prosperity.
Noting that the Summit isa“leaders-led strategic forum” with members from the major Asia-Pacific countries, and provides both representation and influence, Li said that East Asia needs to push forward synchronously the fight against the COVID-19 pandemic and economic recovery to continue injecting impetus into global development.
Third, all parties should promote green development, respond to the challenge of climate change in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities, fully and effectively implement the Paris Agreement, promote low-carbon transformation inabalanced and orderly manner, and achieve synergies with economic development and people’s livelihoods, while ensuringastable and secure energy supply, said Li.
Myanmar is an important participant in East Asia cooperation. China supports ASEAN in properly handling relevant issues in the “ASEAN way”, promoting ASEAN unity, regional stability and Myanmar’s peace and reconciliation process, according to the premier.
“Thanks to the joint efforts of China and ASEAN countries, the overall situation in the South China Sea has remained stable,” Li said.
1-3 Chinese Premier Li Keqiang attends the 16th East Asia Summit via video link at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Oct. 27, 2021 (Xinhua/Zhang Ling)